Ny Fifidianana UNWTO dia namono ny fahalalam-pomba sisa tavela tao amin'ny rafitra UN
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany an'ny governemanta sy ny sekolim-panjakana » Ny Fifidianana UNWTO dia namono ny fahalalam-pomba sisa tavela tao amin'ny rafitra UN
Ny filankevitra mpanatanteraka UNWTO dia nanitatra ny andraikitry ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Zurab Pololikashvil hatramin'ny faran'ny 2025. Andro mampalahelo izany fa tsy fanombanana ireo mari-pahaizana na hetsika nataon'i Andriamatoa Zurab.
Androany dia namidy ny sekretera jeneraliny ankehitriny Zurab Pololikashvili ny filankevi-pitantanan'ny faha-113 an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahantany (UNWTO) tamin'ny zotram-bidy 76% manohitra ilay Ramatoa Shaikha Mai Bint Mohammed Al Khalifa amperin'asa tokana avy any Bahrain.
Ity fifidianana UNWTO ity dia tsy momba ny zava-bita tsara na ratsy, ny vina, na hetsika ataon'ny masoivoho iray mikambana ao amin'ny UN izay tadiavin'ny tontolon'ny fizahantany hitarika. Mikasika ny fitiavan-tenan'ny olona tokana sy ny fandresena amin'ny fifidianana na ahoana na ahoana.
Mba hanampiana ny fanompana sy ny ratra amin'ny toe-javatra iray izay efa nahasosotra, tao Madrid, dia samy naneho ny fanohanany ny UNWTO sy ny mpitarika azy ny praiminisitra Espaniola, Pedro Sánchez, ary ny Mpanjaka Majestic Felipe VI. Ny minisitry ny raharaham-bahiny avy any Georgia no nanohana ny sakafo ofisialy ny alina talohan'ny fifidianana.
Ny tokony hifanarahan'ny rehetra: ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Zurab Pololikashvili, izay masoivohon'i Georgia teo aloha tany Espana tany Madrid. tompon'ny fanodikodinana diplomatika tamin'ny 2017 ary nihatsara bebe kokoa tamin'ny taona 2020.
Tamin'ny taona 2017, ny fanamafisany ny maha sekretera jeneraly azy dia saika nifamaliana talohan'ny fivorian'ny UNWTO General tao Chengdu, Sina, avy amin'ny mpifaninana am-perinasa Dr. Walter Mzembi avy any Zimbabwe ary nanohana an-dRamatoa Dho Young-shim avy any Korea Atsimo.
Ny antony nanaovan'i Dr. Mzembi hanafoana ny fanoherany dia ny fampanantenan'ny UNWTO hamerina ny fomba fiasa amin'ny fizotry ny fifidianana. Izy io dia notohanan'ny sekretera jeneraly teo aloha, Dr. Taleb Rifai, ary i Zurab Pololikashvili izay niditra. Nampanantena i Dr. Mzembi fa hitarika hetsika tahaka izany.
Nanjary fampanantenana politika diso izany ary niteraka fanamafisana malefaka ho an'i Zurab tamin'ny 2017.
Ny famerenana ny fizotry ny fifidianana dia tsy nisy vokany.
Hatramin'ny taona 2020, ny tontolon'ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia nandalo krizy ratsy indrindra hatrizay noho ny COVID-19.
Nahavita nanararaotra io krizy io i Zurab, nanampy fitaovana politika fanampiny hiantohana ny fifidianana indray.
Ahoana ny fandotoan'ny UNWTO ny antso vonjimaika nataon'ny Firenena Mikambana, dia fanontaniana napetrak'ity publication ity tamin'ny 13 septambra 2020
Ity misy famintinana:
Niantso fivoriana ara-batana ho an'ireo mpikambana ao amin'ny Conseil Executive 112 tany amin'ny tanindrazany Georgia i Zurab tamin'ny volana septambra 2020. Ny Coronavirus dia nanasarotra ny fanatrehan'ny mpikambana iray tao amin'ny filankevitra.
Ny fe-potoana hamoahana ireo fandaharam-potoanan'ny fandaharam-potoana ao Georgia dia tsy namela ny fanoherana an'izay mandray anjara hifaninana amin'ny daty hanatanterahana ny fivorian'ny Filankevitra 113 hatramin'ny 18-19 Janoary fa tsy ny Mey. Ny antony dia ny mba hisian'ny hetsika mifanandrify amin'ny FITUR, na izany aza, nofoanana ny FITUR andro vitsivitsy monja taorian'io.
Ny fe-potoana hamoahana ireo fandaharam-potoanan'ny fandaharam-potoana ao Georgia dia tsy namela ny mpikambana hanana safidy hafa rehefa nolazaina fa tsy maintsy misoratra anarana amin'ny fahalianany ireo kandidà vaovao hifaninana amin'i Zurab ao anatin'ny 6 herinandro. Herintaona mahery talohan'ny fe-potoana ivoahan'ny kandida toy izany. Ny ankamaroan'ny firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO dia gaga na mety tsy nahatsapa akory. Ny olana maika tany amin'ireo firenena mpikambana dia ny momba ny COVID fa tsy ny an'ny kandidà.
Kandidà fito ihany no nisoratra anarana, saingy kandidà iray avy any Bahrain ihany no navela hiditra. Ny sekretera UNWTO notarihin'i Zurab dia nandà fampiharana 6. Tsy fantatra ny antony na iza no nangataka.
Ny hany kandidà nanao fampielezan-kevitra hanohitra an'i Zurab dia tsy nanam-potoana hanaovana fampielezan-kevitra. Tsy afaka nanao fampielezan-kevitra ny famerana ny dia noho ny COVID.
Zurab dia nampiasa vola UNWTO hitetezana an'izao tontolo izao saingy nifantoka tamin'ny firenena mpikambana ao amin'ny Executive Executive fotsiny. Ireo firenena ireo dia tsy mandray anjara afa-tsy amin'ny 20% amin'ireo firenena mpikambana rehetra fa natolotry ny Zurab tao anatin'ny 2 taona lasa, raha ny 80% amin'ireo firenena mpikambana kosa dia tsy nahazo na tsy dia nifantoka firy.
Tany anaty hidina mangidy i Espana, nisy oram-baratra ririnina nandrava ny tanàna 2 andro monja talohan'ny fivorian'ny Executive Executive, ka tsy afaka nanao dia lavitra tany Espana ny ankamaroan'ny minisitra.
Nanizingizina ny fihaonana ara-batana tany Madrid ny UNWTO ary tsy hamela fifidianana na fivoriana virtoaly.
Amin'ny tsy nampoizina, minitra 48 ora farany, nahazo alàlana hampiantrano ny sakafo hariva ofisialy ny minisitry ny raharaham-bahiny any Georgia alohan'ny nanasana ny fifidianana ho ao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny UNWTO. Tsy misy firenena te-hanohitra minisitry ny raharaham-bahiny amin'izany fotoana izany izay tonga hahita ny fandresen'ny kandidàny.
Satria tsy afaka nandeha mora ny minisitra dia nifidy tamin'ny anaran'ny fireneny ny masoivoho any Madrid.
Tsy mazava ny isan'ny minisitra fizahan-tany niseho, firy no soloin'ny masoivoho, ary firy ny isan'ny vatom-pifidianana tafiditra tao anatin'izany. Na inona na inona dia mazava fa firenena vitsivitsy monja no nanapa-kevitra ho an'ireo firenena mpikambana 150+ izay hitarika ny fizahantany amin'ny krizy lehibe indrindra natrehin'ity orinasa ity.
Ny sekretera jeneralin'ny UNWTO roa teo aloha, ny sekretera jeneraly mpanampy iray teo aloha, ary ny talen'ny mpanatanteraka iray an'ny UNWTO teo aloha dia nangataka ny hitsiny amin'ny fifidianana, na izany aza, dia azon'i Zurab izany.
Amin'ny alàlan'ny World Tourism Network (WTN), a Fahamendrehana ao amin'ny tobim-pifidianana UNWTOnanomboka, ary mpikambana WTN an-jatony misolo tena ny matihanina amin'ny indostrian'ny fizahan-tany avy amin'ny firenena 125 no nampandrenesina. Ny olona rehetra namaly dia nanohana ny fanangonan-tsonia ho an'ny UNWTO hamerina handahatra ny fivorian'ny Executive Council, hamela kandidà maro hifaninana, ary hitahiry ny maha-marina ny fampielezan-kevitra. Ity fanangonan-tsonia ity koa dia nosoniavin'i Dr. Walter Mzembi izay nankinin'i Zurab sy Taleb tamin'ny taona 2018 mba hamerenany ny lalam-pifidianana.
Ity fanangonan-tsonia mangataka ny rariny sy ny hitsiny amin'ny fizotry ny fifidianana ity dia nalefa tany amin'ny mailaka, nalefa tamin'ny mailaka ary / na natolotra ny firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO Executive Executive 35 talohan'ny Krismasy. Ny masoivoho amerikana rehetra dia notompoina. Firenena iray monja no nandefa fanekena.
Ny fanangonan-tsonia koa dia natolotra an-tanana ny foiben'ny UN UN New York.
Ity fifidianana ity dia tsy vitan'ny tsy rariny, fa voahitsakitsaka Fitsipika etika JIU ary tsy tokony hotohanan'ny fivoriana faha-24 amin'ny UNWTO General Assembly ao Maraoka amin'ny faran'ity taona ity.
9 no nifidy an'i Bahrain. Tsy mazava ny isan'ny firenena 26 an'ny Executive Council nifidy an'i Zurab izay nifidy mivantana na tamin'ny alàlan'ny proxy. Raha nisy olona nanintona ny saina tamin'ny fotoana nitondran'i Zurab, firenena ireo ny Executive Council. Ireo firenena ireo dia sariaka tamin'i Zurab.
Ireo solontena vitsivitsy nanatrika tao Madrid omaly dia nohajambain'ny fahitana ihany koa ny fiheverana olona iray monja, nanadino ny andraikitr'izy ireo nifidy ihany koa ho an'ireo firenena 150+ hafa izay ao anatin'ity masoivohon'ny Firenena Mikambana manerantany ity.
Juergen Steinmetz, mpanorina ny World Tourism Network, dia nilaza hoe: “Ny fifidianana dia tsy hoe mikasika ny fahaizan'i Zurab mahay na tsia. Tsy momba ny zava-bitany sy ny zava-bita andrandrainy amin'ny ho avy izy io. Mikasika ny fahamarinana sy ny etika izany.
"Ahoana no ahafahan'ny UNWTO manantena ny hidiran'ny firenena toa an'i Etazonia na UK, mahafantatra ny fomba avela hiasa amin'ity masoivoho ity?"
"Andro iray hafa mampalahelo ho an'ny Fizahantany manerantany.
'Gloria Guevara avy amin'ny World Travel and Tourism Council dia niezaka tamim-pahombiazana nampivondrona ireo sehatra tsy miankina sy tsy miankina. Ny WTTC dia navela hitory mandritra ny 3 minitra momba ny andraikitry ny sehatra tsy miankina amin'ity krizy ity. ny Tambajotra fizahan-tany manerantany vonona hiara-hiasa amin'ny WTTC.
Ho ahy dia i Gloria no tena mahery fo amin'ny fomba ahafahan'ny vehivavy matanjaka iray sy ny ekipany mahay mamaly an'ity toe-javatra tsy mbola nisy toa azy ity.
“Amin'ny fotoanan'ny krizy dia tsy tokony hisy toerana ho an'ny fitiavan-tena. Vao nahita an'io isika tany Etazonia tamin'ny fifidianana filoham-pirenena.
“Na dia faly aza aho dia naneho ny 'fiarahana' tamin'ny fampielezan-keviny i Zurab, hatreto dia mbola tsy namaly akory izy hatramin'ny nandraisany ny asany tamin'ny taona 2018 na inona na inona avy amin'ny WTN na eTurboNews. "
Voafitaka noho ny fahafaha-mifaninana mifaninana amin'i Zurab amin'ity fifidianana manan-danja ity Ramatoa Shaikha Mai Bint Mohammed Al Khalifa avy any Bahrain dia niarahaba tamim-pitiavana an'i AndriamatoaZurab.
Fanavaozana ho avy: fangatahana be loatra amin'ny tsena tsy misy lanjany amin'ny taona ho avy (2021-2030) -Market.Biz
Data fiarovana sy vahaolana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny tsena fikarohana, fampandrosoana ary fironana amin'ny ho avy | EMC Corporation, Hewlett-Packard Enterprise